Waftiga Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare oo la kulamay Maamulka jaamacada umo Darmaan iyo jaamacda furan ee dalka Suudan – Ministry of Education in Puntland
By editor	/ January 11, 2017
11/January/ 2017- Wafdiga Wasaarada Waxbarashada iyo tacliinta sare Puntland oo hogaaminayo Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland Dr Maxamed Cali Faarax ayna Waheliyaan Agaasimaha Waxaada Imtixanaadka Axmed Maxamud Warsame (Axmed Saahid) iyo Saraakiisha Xafiiska Imtixamadka Dowlada Puntland,waxay kulan gaar ah la qaateen Maalintii 8aad Gud. xigeenka Jaamacada Umo durman Proff. Khadar idiris, kulan kaani wuxuu ahaa kulan lagu qiimaa lahaa kaas oo waxtar u ah dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan Puntlland Kulan kaan waxaa la isku afgartay
In Heshiis rasmi ah lawado galo oo deeqo waxbarasho oo heerar kala duwan leh sanadle ah
in ardayd Wasaaradu sugaysay qubuulkooda iyo Visahooda sida ugu dhakhsiya badan la soosaaro.
3.In luuqada carabiga la xoojiyo. Wafdigu wuxuu ku guulaystay in heshiis rasmi ah ay wadagalaan Jaamacada Omudurman ee Dalka suudaan kaas oo ku cad xiriirka Labada dhinac iyo Deeqaha waxbarashada heerarkeeda kala duwan.
Dhinaca kale Wafdiga Wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sare Puntland waxay kulan gaar ah la yeeshay Ku simaha Jaamacada Jaamacada Furan ee Suudaan Proff Maxamed Abo Emam Kulan kaani waxaa la isku afgartay
In la xoojiyo xiriirka Jaamacadaha Puntland iyo Jaamacada suudan ee furan ( Open university of Sudan)
2.In la xoojiyo luuqada carabiga maadaama ay dastuurka Puntland ku taalo.
3.In ardayda Puntland ay u furantahay in Waxbarashada fog ee elektarooniga ah ay wax ka barankaraan Jaamacada furan ee Suudaan ayagoo gurigooda ama shaqadooda haysta.
Waftigaan ayaa dadaal ugu jira baahinta iyo tayaynta Waxbarashada Puntland, waxaa safar isugu jira booqasho iyo Tababar loosamaynayo waaxda imtixaanaadka kutagay Dalka Suudaan wafdi ka kooban afar qof oo uu hogaaminayo Wasiir ku xigeenka wasaarada waxbarashada iyo Tacliinta sare